Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Barcelona & Real Betis Ee Kulankii Camp Nou, Xidigihii Kulankan Isku Muujiyay Iyo Kuwii Ku Fashilmay – WWW.Gool24.net
Barcelona ayaa guul ku furtay xili ciyaareedka cusub ee horyaalka La Liga kadib markii ay 2-0 ugu awood sheegatay kooxda Real Betis. Valverde ayaa loo diwaan galiyay guushii ugu horaysay ee kulan rasmi ah oo uu Barca la gaadhay. Ka hor intii aanu bilaamin kulankii Camp Nou waxay kooxaha Barcelona iyo Real Betis xus u sameeyeen dadkii ay wax yeeladu ka soo gaadhay weeraradii khamiistii ka dhacay magaalada Barcelona iyada oo sidoo kale kulamadii La Liga ee kooxaha kale lagu xusay.
Ciyaartoyda Barcelona ayaa xidhnaa garamaan aan wax magacooda ah lagu qorin balse dhabarka looga soo xardamay magaca magalaada Barcelona. Barcelona ayaa guushii ay ka gaadhay Real Betis u hibaysay magaalada ay ka dhisan tahay ee ay weeraradii dhibaatada gaystay ka dhaceen.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qiimayntii ciyaartoyda kooxaha Barcelona iyo Real Betis taas oo markasta lagu ogaado ciyaartoydii bandhiga ugu fiican sameeyay, kuwii fashilmay iyo waliba ciyaartoydii qaab ciyaareedka meel dhexaadka ah soo bandhigay.
XIDIGII GAROONKA: Lionel Messi ayaa xidigii garoonka ugu fiicnaa isaga oo kooxdiisa ka caawiyay in ay Real Betis guul ka gaadhay. Inkasta oo aanu Messi wax goolal ah dhalin waxa uu haddana halbawle iyo isku xidh u ahaa ciyaartoyda kooxdiisa ay ka maqnaayeen xidigaha muhiimka ah.
Messi ayaa markii ugu horaysay waayihiisa ciyaareed hal kulan saddex jeer birta garaacay isaga oo aan waliba haddana gool dhalin, waxa uu tuuray 10 darbo oo goolka ah, waxa uu kubbada taabtay 92 jeer isaga oo sidoo kale sameeyay 5 gambis. Messi oo aan kulankan haysan xidigihii uu sida fiican ula soo qabsatay ee Iniesta, Suarez iyo Neymar oo baxay ayaa udub u dhexaad u ahaa kooxda Valverde.
Marka laga yimaado xidigii garoonka waxaa kulankan wacdaro ka dhigay saxiixa cusub ee Nelson Semedo kaas oo jamaahiirta Barcelona kaga farxiyay qaab ciyaareed ilqabad leh. Javier Mascherano, Jordi Alba iyo Sergi Roberto ayaa Messi ugu soo dhawaa qiimaynta ugu saraysa laakiin Paco Alcacer ayaa ahaa xidiga kaliya ee kulankan ku fashilmay dhinaca Barca.
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen – 6, Nelson Semedo – 8, Samuel Umtiti – 7, Javier Mascherano – 8, Jordi Alba – 8, Ivan Rakitic – 6 ,Sergi Roberto – 8, Sergio Busquets – 6, Gerard Deulofeu – 7, Lionel Messi – 8.36, Paco Alcacer – 5
Badalkii: Aleix Vidal – 6, Denis Suarez n/a, Lucas Digne n/a
QIIMAYNTA CIYAARTOYDA REAL BETIS:
Guud ahaan Real Betis ayaan soo bandhigin qaab ciyaareed liita laakiin waxay awoodi wayday in ay wax dhibaato ah wayn ku abuuri karto Barca. Waxaa kulankan ugu liitay Tosca, Leiva, Joaquin iyo Leon.
Real Betis: Adan 6, Barragan 6, Mandi 6, Feddal 6, Tosca 5, Guardado 6, Leiva 5 (Francis 6), Narvaez 6 (Garcia 6), Camarasa 6 (Ruiz), Joaquin 5, Leon 5.